Fumanisa iitattoo ezintle zohlobo lofudo kunye neemilo zejiyometri | Ukuzoba
Iitattoo zofudo ezinemilo yejiyometri
Susana Garcia | | Iitatoo, IiTattoos zezilwanyana
Los Iitattoo zofudo zingayinto entle, kuba sisilwanyana esimele ixabiso elikhulu. Ukusukela kwiinkcubeko zamandulo esi silwanyana simelwe ngeendlela ezininzi kwaye sivele kuzo zonke iintlobo zamabali. Imelwe ithwele umhlaba emagxeni ayo, njengomama okhuselayo kwaye ikwasisilwanyana esidityaniswa nokukhuselwa kwegobolondo kunye noxolo, ngenxa yoxolo olusikhuthazayo.
Zininzi Iintsingiselo esinokuzinika ufudo, ukusuka kubulumko ukuya ekuphumleni okanye ekude, njengoko ineempawu ezininzi. Isilwanyana esine-century esithandwa ngumntu wonke. Kule meko siza kubona iitattoos ezenziwe ngeemilo zejiyometri.
1 Iitattoo zika Turtle ezineqokobhe lejiyometri
2 I tattoo enemibala yofudo
3 Iitattoo zofudo ezinemilo yejiyometri
Iitattoo zika Turtle ezineqokobhe lejiyometri
Ezi Ufudo lusebenzisa iimilo zejometri ezilula kakhulu, ke sifumana ezinye izilwanyana apho iqokobhe, uphawu lokhuselo, limi ngaphezu kwazo zonke. Kwenye yazo kukho umahluko omkhulu kulusu lofudo kwaye kolunye ufudo lwenziwe ngokupheleleyo nezo zeemilo zejiyometri ezilula. Ngapha koko, bongeza umbala obalaseleyo ngesitayile samanzi.
I tattoo enemibala yofudo
Ufudo lukwanazo ezo zinto zichukumisayo zejiyometri kodwa ukuya kwinqanaba elincinci. Yindlela yetatoo yanamhlanje kakhulu, ene i-pointillism kunye nemibala eqaqambileyo eblowu, umbala onxulumene nelizwe laselwandle. Isiphumo yitatoo yoqobo yokwenene.
Ezi zimvo balubeka ufudo kwelinye icala neemilo zejiyometri kwelinye, Ukuyinika ubucukubhede obuthile bale mihla kunye noqobo. Basebenzisa imigca echokoziweyo ukuze loo migca ivele ngasemva, ishiye ukubalasela kufudo. Ithini itatoo oyithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Iitattoo zofudo ezinemilo yejiyometri
Umvambo kaBelén Rueda, akukho nto inobukrelekrele kwaye ibetha kakhulu
Iitato ze-Owl ngeendlela ezahlukeneyo